Waa sidee dareenka galmada marka la isticmaalayo cinjirka | Raganimo University
Waa sidee dareenka galmada marka la isticmaalayo cinjirka
January 31, 2019~1 minute
Ragg iyo dumar badan ayaa aaminsan in cinjirka uu yareeyo dareenka galmada, hadaba taasi ma saxbaa? Horta wax la mid ah ma jiraan marka labo jir oo dabiici ah ay istaabtaan, hadana horumar weyn ayaa laga sameeyay farsamada cinjirka galmada sanadihii dambe.
Cinjirka tayada leh ayaa ah mid aan wax badan ka badaleyn dareenka galmada. Qaasatan haddii aad hesho mid cabirkaaga saxda ah isla markaana qafiif ah. Cilada ugu weyn ee uu leeyahay cinjirka dhinaca galmada ayaa ah in haddii aysan gacalisadaada ahayn mid aad u qoyan in uu dhalinayo qaleyl taasoo keeneysa xanuun haddii ay hawshu dheeraato. Si taas aad xal ugu hesho waxaad sameyn kartaa in aad iska badasho muddo ka dib.
Muhiimada loo isticmaalo cinjirka ma ahan in uu raaxo siyaadiso balse waa in laga fogaado cudurada iyo uurka. Waxaa la ogyahay in cinjirku uu yahay wadada ugu amaansan ee looga fogaan karo labadaas arimood.